လွယ်ကူသောငှက်ပျောဖွဲ Muffins - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဆန် crispy မြေပဲထောပတ်ချောကလက်ဆကျဆံတယျ
ငှက်ပျောသီးဖွဲ Muffins နူးညံ့။ စိုထိုင်းသော ဖြစ်၍ သူတို့သည်ပြည့်ဝသောနံနက်စာသို့မဟုတ်နေ့လည်စာစားရန်သူတို့ကိုအရသာပြည့်ဝစေသည်။
တစ်နည်းနည်းနှင့်အတူနွေးဝတ်ပြုကြ၏ ပျားရည်ထောပတ် သင်၏မိသားစုသည်ထပ်ခါထပ်ခါတောင်းဆိုသည့်နံနက်စာဖြစ်လိမ့်မည်။
သင့်ကိုဝမ်းဗိုက်ပူနွေးစေသောငှက်ပျောသီး muffin စာရွက်ကိုယူဆောင်လာရန် Alberta Wheat နှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။
Muffins ကဒီမှာပတ်ပတ်လည်အဓိက၏ကြင်နာဖြစ်ကြသည်, သူတို့က, လွယ်ကူစွာအေးခဲခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဆုပ်ကိုင်ဖြစ်ကြပြီးရေစာသွားရန်လွယ်ကူပါတယ်! ငါအများကြီးရိုးရာကိုချစ်သကဲ့သို့ ငှက်ပျောသီး Muffin , ငါသည်လည်း bran muffin ၏အကြိုးပွုနီးပါးအာဟာရအရသာကိုချစ်၏။
မှန်ကန်တဲ့ငှက်ပျောသီးလို့ထင်ရင်ငါတို့အကြိုက်ဆုံးပဲ လွယ်ကူသောငှက်ပျောပေါင်မုန့်ညက် ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားအကြီးအအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်! ဤလွယ်ကူသောငှက်ပျောသီးသဘာ ၀ ဓာတ်ငွေ့သည်ဂျုံတစ်လုံးနှင့်ဖွဲနု၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်အတူမှည့်သောငှက်ပျောသီးကိုပေါင်းစပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်!
ဒါဆို Bran ဆိုတာဘာလဲ။ Bran သည်ဂျုံ၊ Oats နှင့်ဆန်ကဲ့သို့သောအစေ့၏အပြင်ဘက်အလွှာဖြစ်သည်။ ဖွဲနု muffin ချက်ပြုတ်နည်းများ (ဤကဲ့သို့သော) တွင်အများဆုံးဂျုံဖွဲများကိုအသုံးပြုသည်။ ဂျုံဌာနခွဲတွင်ဗီတာမင်များနှင့်သတ္တုဓာတ်များစွာပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ဖွဲနုကိုစားသောအခါ, ငါတို့ကတကယ်တော့အစာကြေကြဘူးဒါပေမယ့်သူကကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်အဝခံစားရကူညီပေးသည်နှင့်လေ့လာမှုများကအူမကြီးကင်ဆာနှင့်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများအကြားကိုယ်အလေးချိန်အတွက်အကူအညီကိုကူညီပေးသည်ပြသထားတယ်။
မုန့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ hash အညိုရောင် casserole
စိုထိုင်းသော muffins စေရန် ငါ mashed ငှက်ပျောသီးထည့်ပါ။ ဤငှက်ပျောသီးဖွဲစည်းများသည်မအောင်မြင်သောအရာများဖြစ်ပြီးအချိန်တိုင်းperfectlyုံပျော့ပျောင်းနေသည်။ စိတ်ထဲမှာထားရလွယ်ကူတဲ့အချက်နှစ်ချက်:
ဒီစာရွက်ကိုလိုအပ်တယ် ဂျုံဖွဲ အရာကုန်စုံစတိုးဆိုင်ထဲမှာမုန့်ညက်အနီးတွင်တွေ့သည်။ ဤစာရွက်သည်ဖွဲနုပ်သီးနှံမသုံးပါ။
အခွံမာသီးသို့မဟုတ်ချောကလက်ချစ်ခြင်းများကိုထည့်နိုင်သည် (သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သော cranberries စပျစ်သီးပျဉ်အစားထိုးနိုင်ပါသည်) ။
သင့်ဘက်ထရီကိုမလွန်ပါစေနှင့်။ အလွန်အကျွံမွှေခြင်းကသင်၏ muffins ကိုသိပ်သည်းပြီး chewy ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အခန်းအပူချိန်တွင်အလုံပိတ်ကွန်တိန်နာတွင်သိုလှောင်ထားပါ။ အစာမကျွေးမီ (ကျွန်ုပ်တို့စက္ကန့် ၃၀ microwave) ပျော့ပျောင်းစေရန်အပူ။
သငျသညျအယ်လ်ဘာတာဂျုံကော်မရှင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပိုပြီးအရသာဂျုံချက်ပြုတ်နည်းများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဘဝရဲ့ရိုးရှင်းသောပါဝင်ပစ္စည်း စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး (ဒီစာရွက်ထဲမှာငါသုံးခဲ့တဲ့တူသောဂျုံတစ်လုံးအပါအဝင်)! ဂျုံမှုန့်အားလုံးသည်ဖိုင်ဘာ၊ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပင်အခြေခံသည့်ပရိုတင်းလည်းဖြစ်သည်။
ဖြည်းဖြည်းစတင်ပါ - ဂျုံမှုန့်လုံးသည်အာဟာရနီးပါးရှိသည်။ ဂျုံမှုန့်လုံးကိုယခင်ရည်မှန်းထားသောဂျုံမှုန့်နှင့်ပေါင်းစပ်သည့်အခါပထမပိုင်းတွင်သေးငယ်သောအရာ (အစားအားလုံး၏ထက်ဝက်နှင့်ဂျုံတစ်ဝက်) ကိုအစားထိုးပါ။ ဂျုံမှုန့်တစ်ခုလုံးကိုပိုမိုကြီးကြီးမားမားထည့်သွင်းလိုပါသလားဆိုတာကိုသင်ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်ထပ်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ဘယ်လိုအရသာရှိသလဲဆိုတာကိုသင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။
အစားထိုး၏အချိုး - ဂျုံမှုန့်လုံးသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည့်ဂျုံမှုန့်အားလုံးထက်ပိုမိုသိပ်သည်းသည်။ ပုံမှန်ဂျုံမှုန့်အတွက်ဂျုံတစ်လုံးလုံးကိုလဲလှယ်သောအခါသင်ရည်ရွယ်ထားသောဂျုံမှုန့်ထက်လျော့နည်းအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဂျုံမှုန့်လုံးနှင့်အဖြူရောင်ဂျုံမှုန့်အတွက် ၃း၄ အချိုးကိုစမ်းကြည့်ပါ။
နည်းနည်းပိုအရည်ထည့်ပါ - ဂျုံမှုန့်လုံးသည်အစိုဓာတ်ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်သည်။ သင်၏စာရွက်ခြောက်သွေ့ခြင်းမှကင်းဝေးစေရန်အပိုဇွန်းတစ်ဇွန်းသို့မဟုတ်အရည်နှစ်မျိုးပေါင်းထည့်လိုသည်။
ပိုမိုလွယ်ကူ Muffin ချက်ပြုတ်နည်းများ
Gingerbread အမွှေးအကြိုင် Muffins
ငှက်ပျောသီးအခွံ Crunch Muffins
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၁၈ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၂၈ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၂ muffins စာရေးသူHolly Nilsson ပြီးပြည့်စုံသောနံနက်စာသို့မဟုတ်ရေစာအဘို့အစပျစ်သီးပျဉ်နှင့်အတူချိုမြိန်ငှက်ပျောသီးဖွဲနု muffins ။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢¾ ခွက် ဂျုံမှုန့်
▢၁ ခွက် ဂျုံဖွဲ
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သစ်ကြံပိုးခေါက်
▢၁ ခွက် ရွှေစပျစ်သီးပျဉ်
▢⅔ ခွက် အလင်းအညိုရောင်သကြားထုပ်ပိုး
▢၁ ခွက် mashed ငှက်ပျောသီး (၃ သေးငယ်သည်)
▢⅓ ခွက် ထောပတ် အရည်ပျော်
375 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှမီးဖို Preheat ။ စက္ကူကူကြောင်များနှင့် muffin ဒယ်အိုးတန်း။
ဂျုံမှုန့်၊ မုန့်ဖုတ်အမှုန့်၊ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ၊ သစ်ကြံပိုးနှင့်ဆားတို့ကိုပေါင်းစပ်ပါ။ အတူတူ Whisk စပျစ်သီးပျဉ်အတွက်နှိုးဆော်။
သီးခြားပန်းကန်လုံးတွင်ကြက်ဥ၊ သကြားအညို၊ ငှက်ပျောသီး၊
ခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက်ရေတွင်းတစ်ခုဖန်တီးပါ။ ကြက်ဥအရောအနှောထည့်ပြီးပေါင်းစပ်သည်အထိမွှေပေးပါ။ မရောနှောပါနှင့်။
၁၈-၂၂ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ်အလယ်တွင်သွားထည့်ထားသောသွားကြားထိုးတံသည်သန့်ရှင်းစွာထွက်လာသည်အထိပြုလုပ်ပါ။
တစ်ဝါယာကြိုးထိန်သိမ်းအပေါ် Cool ။
ထောပတ်နို့ရည်ကိုနို့ရည်ဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။ ၁ ခွက်တိုင်းတာသောခွက်တွင်သံပုရာဖျော်ရည်သို့မဟုတ်ရှလကာရည် ၁ ဇွန်းကိုထည့်ပါ။ နို့နှင့်အတူ 1 ခွက်ထိပ်တန်း။5မိနစ်ထိုင်ကြကုန်အံ့။
သော့ချက်စာလုံးဖွဲနု muffins, စပျစ်သီးပျဉ် muffins သင်တန်းနံနက်စာ၊ သရေစာ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
ဒီစာရွက်ကကမကထခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အယ်လ်ဘာတာဂျုံကော်မရှင်ရဲ့ဘဝရဲ့ရိုးရှင်းသောပါဝင်ပစ္စည်း စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး။ ကျွန်ုပ်သည်ဤရာထူးအတွက်လျော်ကြေးငွေပေးအပ်ခဲ့သော်လည်းအတွေးများနှင့်ထင်မြင်ချက်များအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်။ ငါနှစ်သက်သောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းကသင့်ကိုသင်နှစ်သက်သောအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများကိုယူဆောင်လာရန်ခွင့်ပြုသည်။